I-Plywood Flooring, I-plywood engenamanzi, i-Laminated Marine Plywood - i-Yige Wood
Inkampani yethu ihlanganisa indawo engu-1.2 million square metres, siphethe u-100,000 m3/ngonyaka we-plywood yefenisha, umthamo we-300,000 m3/ngonyaka we-DIFFENBACHER ulayini wokunyathelisa oqhubekayo kanye nemishini yokusika ye-rotary engaphezu kuka-50.
Imikhiqizo yethu isidlulile i-iso9001, ISO 4001, isitifiketi se-CARB, futhi inamalungelo obunikazi angaphezu kuka-20. Kunabasebenzi abangaphezu kwe-1,200 abangochwepheshe nabezobuchwepheshe, kanye nabasebenzi bonjiniyela nezobuchwepheshe abangaphezu kuka-60.
Inkampani yethu isineminyaka engaphezu kwengu-20 isembonini yamaphaneli esekwe ngokhuni futhi inendawo yehlathi engamamitha-skwele ayizigidi ezi-3. Ukunikezwa kwezinto ezingavuthiwe kuzinze kakhulu futhi kuqinisekisa ikhwalithi.
Isipiliyoni seminyaka engama-20 sokukhiqiza saseChina ...
I-Wholesale Commercial eshibhile engangenwa ngamanzi izinhlayiya ...
Abakhiqizi bezinkuni abangochwepheshe Abashibhile futhi bahle ...
4x8x1-35mm okoume/poplar/sapele ebhekene nekhwalithi...
Imikhiqizo inezitifiketi ze-ISO 9001, ISO 4001 kanye ne-CARB. Manje sihlanganisa indawo engamamitha-skwele ayizigidi ezingu-1.2, abasebenzi abangochwepheshe abangu-1200 kanye nonjiniyela abangaphezu kuka-60.
I-Guangxi Hengxian Yige Wood Co., Ltd itholakala epaki ye-Modern Forestry Industrial, Hengxian County, Province of Guangxi, China. Epaki lezimboni, siphethe imboni ye-plywood enemigqa yokukhiqiza engu-6 kanye nomthamo we-60,000 m3 / ngonyaka weplywood yefenisha; eyodwa 300,000 m3Umthamo wonyaka we-DIFFENBACHER ulayini wokucindezela oqhubekayo ongakhiqiza i-particleboard, i-OSB kanye ne-OSB engaphezulu; kanye nemishini yokusika ye-rotary engaphezu kuka-50 ehlinzeka nge-veneer eyomisiwe yekhwalithi ephezulu ngamasayizi amaningi ahlukene.
ukuqeqeshwa kobuchwepheshe beshabhu ngo-Oct 2021
Umehluko phakathi kwebhodi lokuminyana kanye nebhodi lezinhlayiyana